Pakistana: Avelao Hanidina Ireo Papango · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jona 2017 9:48 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Papango manidina eo amin'ny sisiny. Sary an'ilay mpampiasa Flickr, nomi49, nampiasaina teo ambany Fahazoandàlana Creative Commons
Hatrizay dia nankalaza ny fetin'ny Basant (lohataona) tamin'ny alàlan'ny fampanidinana papango ny vahoaka tany amin'ireo faritra maro ao Pakistana, indrindra ny tao Lahore. Saingy tafalatsaka anaty toerana saropady io fomban-drazana io tanatinà fotoana fohy. Tamin'ny 2005, noporofoin'ny Pakistaney iray mpahay lalàna tanatinà fitsaràna tao Lahore fa tsy fankalazàna Hindoa fotsiny ihany ny Basant fa lalao mahafaty. Hita tanatin'ireo fanoherana manan-danja hafa ny fampiasàna kofehy mahafaty izay niafara tamin'ny fahafatesan'ankizy sy ny fahatapatapahan'ny fampitàna angovo. Taorian'ny fitsaràna, noraràn'ny Fitsaràn'i Lahore ny fampanidinana papango ao amin'ny faritanin'i Punjab.
Isan-taona, rehefa mamony ny voninkazo ary manao tsy nahy ilay fidirany efa nendrasana hatry ny ela ny lohataona, dia ny Basant no ao an-tsain'ny rehetra. Maro ireo mahatakatra ny antony niheveran'ny governemanta fa ilaina ny manao ity ady amin'ny papango tsy mampidi-doza ity, saingy mbola te-hanao izany ny rehetra.
Velona ny adihevitra, vao haingana izay, rehefa navahan’ny Fitsaràna Avon'i Lahore ny fanangonantsonia iray natao hanalàna io fandraràna ny fampanidinana papango io sy rehefa nodinihan'ny fitondrana ho hetsika mampidi-doza izany. Mbola manantena i Raza Rumi ao amin'ny Lahore Nama fa hesorina io fandraràna io:
“Manantena aho fa hiverina aty Lahore io fety io. Manohitra mafy io fanapahankevitra pôlitika io izahay. Tsy azo atao toeram-piarovana ho an'ireo mpampihorohoro mihaodihaody sy mpanao vivery ny ainy i Pakistana raha lavina kosa ny fahafahan'ny olom-pirenena tia filaminana mankalaza fety izay tena ampahany lalina amin'ny kolontsaintsika.”
Hafa ny fomba fijerin'i Hamza Ahmed Qureshi ao amin'ny Lahore Metblogs:
“Manery ahy haneho ny fomba fijeriko ny horakoraka sy tomany ataon'ny ampahan'ny fiarahamonina manoloana ilay fandraràn'ny Fitsaràna Ambony ao Lahore ny Basant.
Misaona ny fahaverezanà hetsika ara-kolontsaina izay nahasarika vahiny an'arivony manerana izao tontolo izao ireo olona ireo. Anatin'ny toerana ara-jeôpôlitika manjaka amin'izao, sarotra amiko ny mino fa hahavita hamitaka vahiny iray efa reraky ny tahotra hankany aminà fandrika mahafaty ireo papango be dia be maro loko. Ambonin'izay, mety ho tranga mampiahiahy ireo olona mpanan-karena mpandeha lanonana sy ireo hotely kintana dimy, izay vitsy an'isa, ity fahaverezana ara-kolontsaina ity, fa tsy ny olon-tsotra.”
Kanefa, manamarika i Momekh fa:
“Adala io fandraràna ny basant io. Tsy antony mitombina mihitsy ny fahaverezan'aina sy ny fahaverezan'ilay famatsiana tsy tapaka ataon'ny WAPDA (Manampahefana amin'ny Fivoaran'ny Rano sy ny Angovo). Ary ireto no mahatonga izany: tsy ny papango manidina no mitera-doza ka mahavery ny aina. Efa elaela ihany no teo ireo papango manidina ireo.”
Manohy ny fanazavany ny nahatonga ny Basant ho lasa olana miteraka adihevitra i Momekh. Mamelabelatra ireo olana tokony hodinihan'ny manampahefana ho solon'io fandraràna ny hetsika io ilay mpitoraka bilaogy:
“Nampidirina tamin'ny alàlan'ny famokarana tady mafy kokoa io fisesisesin'ny famonoana olona tonga dia nampifandraisina tamin'ny Basant io. Maro ireo vahoaka mieritreritra fa ilay ranon-javatra tahaka ny hareza nandomana ilay kofehy no mahatonga azy hitovy amin'ny antsy mampidi-doza. Na dia anisan'ny antony aza ny haranitra, ny antony voalohany dia ny tanjaky ny kofehy. [..]
Ny fitambaran'ilay kofehy mafy dia mafy sy ny ranon-javatra tahaka ny hareza (fantatra amin'ny anarana hoe “manja“) no mahatonga ilay kofehy hamono.”
Raha toa ka afaka mametraka fepetra na lalàna manohitra ny fampiasàna kofehy henjana tahaka izany anatin'ity hetsika ara-kolontsaina sy ara-pomban-drazana ity ny governemanta, mety tsy hiteraka adihevitra io fialamboly io, amin'ity indray mitoraka ity. Kanefa mihenjana kokoa io fandraràna io noho ilay didim-pitsaràna vaovao.
Amin'izao toejavatra izao, mieritreritra ny hitondra ny fampanidinany papango any Inde mpifanolobodirindrina aminy mihitsy aza ireo Pakistaney mpandefa papango. Na eo aza ilay fandraràna dia afaka mahita ireo papango an-jatony misidina eny an'habakabak'i Lahore, izay mampiseho ny lazany.
Nitatitra ny fantsona TV tsy miankina fa 75% an'ny vahoakan'i Punjab, foiben'ny fankalazàna ny Basant, no te hampanidina papango. Saingy tsy mihevitra ny hilefitra manoloana ny marimaritra iraisan'ny vahoaka ny governemanta sy ny fitsaràna. Misy ireo tatitra milaza fa efa vonona ny mpitandro filaminana hijery sy hanasazy ny fandikàna mety hisy an'ilay fandraràna. Azo inoana fa hahavaky fo ny maro izany.